Video:-Warmurtiteed kasoo baxay shirkii Wasiirada Qorshaynta Ee Dalka(GHQ) – Idil News
Video:-Warmurtiteed kasoo baxay shirkii Wasiirada Qorshaynta Ee Dalka(GHQ)
Posted By: Jibril Qoobey May 7, 2019
Golaha Horumarinta Qaranka (GHQ) ayaa shirkiisii labaad ee sanadkan 2019-ka ku yeeshay magaalada Garoowe ee xarunta Dowladda Puntland, kaas oo furmay Maajo 5, 2019 socdayna illaa Maajo 7, 2019.
Shirkan ayaa diiradda lagu saaray dhawr arrimood oo ay ka mid yihiin:
Geeddi-socodka Qorshaha Horumarinta Qaranka iyo ahmiyadaha ka soo baxay wareeggi 1-aad ee wadatashiga QHQ 9aad
Hannaanka iyo qaab-dhismeedka naqshadda deeqaha “Aid Architecture”
Mashruuca ILED oo dalka ka dhaqan-geli doona dhawaan;
Waajibaadka iyo qaab-dhismeedka Xafiiska la socodka Mashaariicda Midowga Yurub (NAO) ee dalka ka socda;
Go’aankii Xukuumadda ee ku aaddanaa in hay’adaha caalamiga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn ay dalka usoo guuraan.
Xaaladda abaaraha iyo roob-yarida dalka ka jirta.
Shirkan oo socday labo maalmood ayaa waxaa Gollahu bogaadiyey habsami u socodka qorista Qorshaha Horumarinta Qaranka 9-aad, isla markaana isla qaatay saddexdii ahmiyadood ee heer qaran ee ka soo baxay wareeggii 1aad ee wadatashiga QHQ 9-aad, kuwaas oo kala ah:
Xoojinta siyaasadda loo dhan yahay;
Amniga iyo sarraynta sharciga
Sidoo kale, wuxuu Goluhu isla qaatay lagama
zmaarmaannimada in dib u eegis lagu sameeyo hannaanka lagu maamulo deeqaha dalka, si taas loo helo, wuxuu Goluhu go’aansaday in shirka soo socda ee Madasha Iskaashiga Soomaaliya (Somali Partnership Forum) la hor geeyo nuqul xambaarsan sida uu noqanayo qaabka ama habka loo maamuli doono deeqaha caalamiga ah (Aid Architecture) taas oo ay Goluhu soo diyaarin doono, soona bandhigi doono.
Goluhu wuxuu u mahadcelinayaa dhamaan saaxiibada Soomaaliya ka caawiya arrimaha gar gaarka, horumarinta iyo dib u dhiska dalka.
Waxaa sidoo kale Goluhu isku raacay:
In ahmiyad gaar ah la siiyo lana dar dar galiyo dhamaystirka Qorshaha Horumarinta Qaranka.
In shirka kan xiga ee Golaha Horumarinta Qaranka lagu qabto caasimadda Dawlad Goboleedka Galmudug ee Dhuusamarreeb.
In shirarka horumarinta iyo dib-udhiska Soomaaliya (Somali Development and Reconstruction Facility-SDRF), laga dhigo wareegto lagu qabanayo caasimadda dalka iyo caasimadaha dawladaha xubnaha ka ah Dawladda Federaalka ah,
In Shirka soo socda ee SDRF ka lagu qabto Caasimadda Dawladda Puntland ee Garowe.
In la sii wado dadaallada lagu xaqiijinayo soo raridda hay’adaha aan dawliga ahayn (INGOs), lana hubiyo dhaqan-galinta go’aankii Xukuumadda Federaalka ah ee 4-tii Oktoobar 2018.
Ugu dambayn, Goluhu wuxuu walaac weyn ka muujiyey roob-yarida sanadkan Gu’ga iyo abaaraha dalka ka jira, sidaas awgeed wuxuu baaq u dirayaa hay’adaha iyo saaxiibada caalamku in ay si deg-deg ah gacan uga geystaan xaaladaha abaareed ee dalka ka taagan, ilaahayna waxaa uga baryaynaa inuu umadiisa usoo naxariisto.
Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Puntland.